Nalalka ay hoggaaminayaan
Tamartaa la cusboonaysiin karo
Halka aan joogno
Sidee nidaamka looxaanta ah?
Nidaamka A looxaanta la deggan yahay waxay isticmaashaa modules qoraxda u nuugo tamarta qoraxda oo badalo koronto baahida qoyska. Nooca ugu badan waa warshad ku xirneeyn qeybiyaha korontada korontada: Tani waxay ku siinaysaa tamarta qorraxda inta lagu jiro maalinta hubinta in aad macrifada kartaa tamarta ee warshadda dabka ee habeenkii ama marka warshad wax soo saarka kuma filna si ay u daboosho baahidaada.
Halkan sida ay u shaqeeyaan modules looxaanta korontada gurigaaga:
Modules ayaa ah looxaanta lagu rakibay saqafka aad u nuugo photons ileyska qorraxda ee iyaga iyo badalo koronto. Wareejinta waxaa galay tamarta bilaabmaa qiyaastii isla markii xiriir. Korontada ayaa soo saaray modules waa DC (Energia CC).
L 'inverter badasha awood DC soo galeen AC (Awood AC) habboon loo isticmaalo guryaha. Arintaan waxaa loo isticmaali karaa in ay awood u nalalka iyo dhammaan qalabka korontada, soo TV, mashiinka dharka lagu dhaqo, conditioner, timo engejiye iyo qaboojiyaha.
Marka ay soo saarta tamarta badan u gubtay,, xad-dhaaf ah waxaa la quudiyey galay xirneeyn qeybiyaha korontada.